Ungayifaka kanjani i-Xfce ku-ArchLinux | Kusuka kuLinux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Aplicaciones, Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ngicabanga ngokuzama ukuzama I-ArchLinux con Xfce (ungangisabisi ama-debianites) ukubona ukuthi iziphatha kanjani. Uma ngikwazi ukuyifaka (namuhla) lapho-ke ngizokwenza isifundo sokuthi ngiyilungiselela kanjani igxathu negxathu.
Kepha uma usuvele ungumsebenzisi we Arch, Ngikushiya izinyathelo zokufaka Xfce ngaphandle kokufa emzameni:
1- Ukufaka i-Xfce eyisisekelo, kufanele nje sibeke ikhonsoli:
Noma uma ufuna ukufakwa ngendlela ethize:
2- Ukufaka ama-plugins (okukhona) de Xfce simane siqhuba lo myalo:
3- Uma sifuna xfce4-mixer sebenza nge I-ALSA, kufanele sifake amaphakheji alandelayo:
4- Ekugcineni lokho Xfce ukusebenza kahle kufanele sifake DBus.
5- Yini ye Xfce kubukeka kukuhle kufanele sifake izinjini IGtk:
Uma singafaki noma iyiphi Umphathi weseshini (Umphathi Wokungena) njengoLigthDM noma uSlim, saqala Xfce ngomyalo:
Noma uma sifuna siyifaka kufayela ~ / .xinitrc.
Futhi kuze kube lapha yonke into kufanele ibe "ejwayelekile" .. Okuningi imininingwane lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ungayifaka kanjani i-Xfce ku-ArchLinux
jjajajaa kuze kz gaara ikuqinisekise ukuthi ushintshe i-distro. hahaha ngiyadlala xD. Ngayifaka ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kepha angikwazanga ukuqala i-kde ngoba ngiphuthelwe ukuqala i-daemon yedus, kepha ngabona kuphela ngemuva kokuqeda ukufunda umhlahlandlela wokufaka ukuthi ngiyisilima se-LOL. Mhlawumbe kule mpelasonto ngizozama ukufaka okucokeme kakhudlwana nangokushesha okuncane.
Hahaha bengingaqiniseki. Ngifuna ukwenza izivivinyo ezithile. Kwirekhodi, uma ngingalisebenzisi i-Arch (futhi ngiye ngasho njalo) kungenxa yesimo sokuxhuma njalonjalo.
Ngizokuthola lokho ... uma ngifaka ama-Arch repos ezindaweni zasendaweni futhi sitholakale kalula kuzo, uzosebenzisa i-Arch? hehe ...
Bekufanele ungeze ama-dbus kuma-daemon ku-rc.conf 😀
Ungakhathazeki, akukhona ukuthi uyisiphukuphuku ... awufundanga nje kahle 🙂
Lutho, uphinde uzame futhi usitshele.
Futhi ngokuthembeka, ngimangele njengani madoda ... angazi ukuthi kungani efuna ukufaka i-Arch HAHAHAHA
Uma, njengoba ngikutshelile kule mpelasonto, ngizozama futhi lapho, ngizokutshela.
Ungasitshela noma yini, yize ngikholwa nokuthi awungezanga i-dbus
Mngakanani umehluko osebenzayo phakathi kokusebenzisa i-Arch ne-Debian Testing, eyokugcina kusuka ekufakweni okuncane. Ngokusobala ucabanga ukuthi usebenzisa, ngaphezulu noma ngaphansi, ideskithophu efanayo nezinhlelo zokusebenza?
Ngokuya ngabaphathi ngicabanga ukuthi iPacman isebenza kahle kakhulu kune-Apt, ngokwesibonelo
Indawo emnyama yamandla inamandla ngokwengeziwe!
Yikho kanye engizama ukukuthola 😀
U-Elva, ngithi u-Elav hlala kude ne-pacman ngenkathi ungakwazi, uma usuyizamile ngeke ufune ukuyishiya 😀
uma [-d ​​/etc/X11/xinit/xinitrc.d]; lapho-ke
ye f ku /etc/X11/xinit/xinitrc.d/*; yenza
i-exec ck-launch-session isiqaloxfce4
Elva, ngithi elav, ungeqa lesi sinyathelo, ake sithi ngokwesibonelo uzosebenzisa iGdm:
Sishiya umugqa olandelayo kanjena:
Singeze ama-daemoni e-gdm ne-dbus
Ukwesaba iXinitrc kungayiqeda i- ~ issue, kaningi ayiphumeli noma uma iphuma ifayili alinalutho
UCouñaje, ngiqonde ukuthi, Isibindi, ngiyabonga kakhulu ngethiphu .. Umbuzo owodwa Kuthiwani uma sisebenzisa i-LightDM?
Angiyazi i-LightDM, kepha bheka iWiki
Ukugembula ngingasho ukuthi ukwengeza umugqa engxenyeni ye-
Isibindi asidingi ukubeka i-gdm kuma-daemon's
amadimoni ami (syslog-ng dbus networkmanager netfs crond)
Fuck labo abaseduze kwakho bazoba ngamaqanda akho, bahlale begxeka i-HAHAHAHA
Ayizange igxeke, icacise kuphela ukuthi akudingekile ukufaka i-gdm kuma-daemon, ukuhlela nje / etc / inittab kwanele. Awukwazi ukuthatha le mpi futhi angizange ngidlale nawe.
Ungakhulumi nami ngakho ulimaze imizwa yami embalwa buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ngangifuna ukubamba, akukho okunye
Ngokuqondile, ayikho i-GDM / KDM edingekayo kuma-daemon ... ukumisa nje i-inittab kahle, akukho okunye 😉
Futhi akulula yini (okungenani kwabaqalayo) ukusebenzisa i-rc.conf, faka i-lightdm noma i-slim lapho, bese uqala i-xfce4 ngaleyo ndlela? Uma usebenzisa i-slim kufanele ulungiselele i-.xinitrc okuyiyona ezokufunda lapho ibhutha. Ngokuya nge-wiki (ezinsukwini zami i-Arch ngiyilungiselele kanjena futhi yasebenza kahle) ukugwema amaphutha ungashintsha ukumiswa okuncane ngokubeka login_cmd exec ck-launch-session / bin / bash -login ~ / .xinitrc% session
ku slim.conf nokugcina i-xinitrc ilula ngangokunokwenzeka. Angazi noma ngabe i-lightdm isivele ikuma-repos, ngicabanga ukuthi ilula ngoba akudingeki usebenzise i-xinitrc (angiqiniseki ngalokhu)
Kunoma ikuphi, konke kuku-wiki! Futhi ukujabulela i-xfce ku-Arch, ngokunambitha kwami ​​enye yezinhlanganisela ezinhle kakhulu ezikhona. Ngaphandle kokukhohlwa ukusebenzisa i-xfwm-tiliing esebenza kahle!
I-PS dbus kufanele ihambe ngaphambi kwe-gdm ku-rc.conf, ngicabanga.
Nginayo njengoba ngiyibekile futhi ihamba kahle
Futhi akulula (okungenani kwabaqalayo) ukusebenzisa i-rc.conf, faka i-lightdm noma i-slim lapho, bese uqalisa i-xfce4 ngaleyo ndlela?
Akwanele uma ufuna ukuthi ilayishe ngokuzenzakalela
<° I-Linux kusho
Ngiwuthola kanjani umhlahlandlela wokufaka wokuqhafaza we-Archlinux? Othile unginika ikhebuli.
Phendula ku- <° Linux
Lo mhlahlandlela uphelelwe yisikhathi, nge-gnome 3 kunamademoni amaningi kakhulu alsa hal fam gdm futhi i-dbus ne-fuse module ayikho.
Futhi nginesibindi, kufanele uthathe umhlahlandlela ngezithombe nakho konke ukufaka i-kde, eyisihlabathi evela ku-xfce noma i-elav nami evela e-gnome 😀
Akuwona umqondo omubi, kufanele sikhulume ngakho ngeposi noma okuthile naye futhi uma bengivumela ukuthi ngikushicilele bengizokushicilela ngqo
esikhashaneni esedlule benginomhlahlandlela wokufaka ovela ku-0, kepha izithombe zesinyathelo ngasinye. Kwenzeka njengonesihlabathi, ngaqala ukuqamba nge-grub2 ngaphandle kokufunda kahle nasemshinini wami, eh, ngincome ngomshini ohamba phambili wamanje futhi ngiqala ukwenza umhlahlandlela kule mpelasonto.
I-VirtualBox, akukho okungcono 🙂
Ngisebenzise i-Virtualbox kuphela.
Uma usunayo, yazisa onesihlabathi bese ungitshela
Sanibonani, ngiyazi ukuthi le nkinga indala, kepha ngisanda kufaka i-arch futhi lapho ngixhuma enye i-usb iyayibona kepha ayingivumeli ngiyibone ithi ayikwazi ukukhweza Ayigunyaziwe ukwenza ukusebenza. Okufanayo kuya nge-cdrom. Engingakwenza. Nginesitoreji nesondo kumsebenzisi wami nakho konke. Bona ukuthi ungangisiza yini.
Zama ukuyingeza eqenjini le-adm ne-disk ukuze ubone.
Nah angikulungele ukwenza imihlahlandlela enemininingwane HAHAHAHAHA
Woza, akuyona into enkulu kangako, sebenzisa umhlahlandlela wokwenza umhlahlandlela oningiliziwe wami ku-ArchBang kusuka eL
Isibindi, ngijabule kakhulu, ngidinga, uma kungenzeka, ukungicacisela ngoba i-KZKG ^ Gaara oyibiza ngobunyoninco.
Hahahaha omunye ongakaze abone uNaruto. Akukho okwenzekayo, ngizochaza. Kukhona uchungechunge lwamaManga olubizwa ngeNaruto lapho omunye wabalingiswa engumholi we ISand Village, igama lakhe nguKazekage Gaara. Umngani wethu esimthandayo unaleso sidlaliso: KZKGGaara, yize empeleni bekufanele ngabe yi-KCKGGaara, kodwa noma kunjalo.
Iphutha ... akudingeki ukuthi libe yi-KCKG ngoba AKUYONA yokubiza amagama, ingeye-CONSONANTS, ngabe uyawabona ama-C ku-KaZeKaGe? 😉
Ungazami ukuyifaka, uyicelile nje, kufanele ubekezelele yona, hahahahahaha.
HAHAHAHAHA sawubona, nginesiphakamiso (esinaso), uma kwenzeka ufuna ukusinika isandla ngaleli sayithi, ngikholwe, uzosisiza kakhulu 😀
Ngibhalele i-imeyili 😉
Eh i-copyright yesandy inegama lami 😀
Uqinisile, bekufanele ngikubuze, hhayi mina
Kuhle ukufaka i-Arch.
Ungazama futhi i-Lxde. Ikhanya, muhle.
Uma usungene ezweni le-Arch, awusoze waphuma.
Sengivele ngingene ngaphakathi .. Ake sibheke ukuthi ihlala isikhathi esingakanani kimi 😀
Futhi lokho okusebenzisa i-Chrome, kuyafika ezinqolobaneni ze-Arch?
Eziphathimandla le Chromium, ku-AUR unezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zokufaka i-Chrome
* i-google-chrome 15.0.874.121
* i-google-chrome-beta 16.0.912.41
* i-google-chrome-dev 17.0.942.0
Hhayi-ke sengivele nginezithombe eziningi zokufakwa kwesisekelo thing into ehlekisayo abathi inzima kakhulu, kepha sengivele ngiyazi ngenhliziyo 😀 bese ngifaka i-gnome 3 bese kufanele ngibeke umbhalo 😀 nencazelo. Eh, uqhuba kanjani ngezingxenye zakho?
Isibindi sahlala kde
sandy noma i-elva izokwenza umhlahlandlela we-xfce. (kahle kahle lona bekungumqondo wami futhi abakaqinisekisi)
Yebo, uma usukwazi ukusebenza nesifaki, konke kulula, akunzima kangako .. U-Ahh no-Elva bathi akanaso isifundo se-Xfce sakho.
U-Elav uzokwenza (noma ukwenzile, angicaci), kepha… nami Xfce? HAHA akukho ukuhlekisa HAHA.
sawubona umuntu angangisiza, ngizama ukufaka ku-arch yomshini ebonakalayo + xfce nomphathi we-gdm sengivele ngifakile i-xorg metapackage, faka i-gdm, engeza idemon ye-dbus (ekugcineni kwakho konke okusohlwini) faka i-xfce kanye ne-xfce-goodies kepha Uma ngiqala umshini yonke into iqala kahle kakhulu kepha uma kufanele ngigijime umphathi wokuqala wesigaba ngithola isikrini esimnyama nesikhombi esimaphakathi esixakile sengathi yibhola
ps: empeleni ngisiyisiqalo kepha bengifuna ukuzama i-arch ngenxa yelukuluku
Kepha isondo lenkinobho alisebenzeli mina kuXFCE noma ku-LXDE ...